Torohevitra hahafahanao mankafy fialan-tsasatra tsara amin'ny mpivady | Bezzia
Susana Garcia | | Psychology sy mpivady, fifandraisana
Ho avy ny fahavaratra ary miaraka aminy ny fotoana izay andehanantsika manao vakansy. Betsaka ny olona manandrana manao vakansy ampifanaraho amin'ny an'ny vadinao mba hahafahanao mankafy azy ireo miaraka. Na izany aza, amin'ireo fialantsasatra ireo dia azo atao ihany koa ny fisian'ny olana vaovao rehefa mandany fotoana bebe kokoa miaraka isika, zavatra iray izay tokony hialantsika.
Fantatsika fa ny fotoana fialantsasatra dia rehefa misaraka ny mpivady maro kokoa noho ny antony maro. Ny mivantana indrindra dia ny fandanian'ireo mpivady fotoana bebe kokoa miaraka ary izany dia mahatonga ny fifandraisana hijery amin'ny fomba hafa. Izany no antony tsy tokony hieritreretantsika ny fomba hankafizantsika tsara indrindra ny fialantsasatra amin'ny maha-mpivady mba hisorohana azy ireo amin'ny loza.
1 Miaraha mifidy ny toerana haleha
2 Tsy maintsy mikasa ny roa ianareo
3 Manomana zavatra mahafinaritra
4 Avelao ny toerana hanirery
5 Sorohy ny fanalam-baraka
Miaraha mifidy ny toerana haleha
Raha handeha hanao vakansy izahay mivady tsy maintsy manao zavatra izay tiantsika roa. Indraindray tsy mora izany satria mety tsy mitovy ny hevitra, toerana tsy tiantsika ary ny olon-kafa tsy tiantsika, na ny fomba fitety hafa. Fa raha miteny ianao dia afaka mamorona fanapahan-kevitra tsara ho anao roa, izay samy ankafizinao. Raha fialan-tsasatra lava dia azonao atao ny mikaroka tranokala maromaro. Izany no mahatonga ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny miresaka eo aminareo roa momba ny toerana mety tianareo haleha sy ny antony ary ny zavatra tianareo hatao ao. Azonao atao ny mahazo ny hevitra tianao haleha.
Tsy maintsy mikasa ny roa ianareo
Zava-dehibe ny fahaliananareo roa rehefa mikasa ny fialan-tsasatrao. Mety ho tsara kokoa ny iray noho ny iray hafa nefa tokony ho izy miresaka eo amin'izy roa ary tadiavo ny fampahalalana isan-karazany. Ilaina ny miditra an-tsehatra satria raha iray monja no manao ny asa rehetra dia ho reraka izany. Mila asa be dia be ny fandrafetana ny zava-drehetra hahafahanao mizara ny lahasa ka samy manao zavatra ny tsirairay avy ary mahavita zavatra mitovy amin'ny fiasana ho mpivady.
Manomana zavatra mahafinaritra
Mandritra ny dia dia mila manandrana zava-baovao ianao, zavatra manaitaitra anao sy azonao atao miaraka. Tsy maninona ny miala sasatra fa tsy maintsy miala sasatra ihany koa ianao mamorona fahatsiarovana fitsangatsanganana mahaliana ary ny fanaovana hetsika mahafinaritra na manaitaitra dia mety ho lavorary. Ny traikefa izay mifandraika amin'ny fotoana mampihetsi-po be dia be dia ireo izay tadidy indrindra, noho izany dia hevitra tsara ny manao zavatra izay tadidintsika foana ho zavatra tsara. Ireo karazana zavatra ireo dia manatsara ny fifandraisana ary manampy fifandraisana mahaliana, zavatra very rehefa mandeha ny fotoana.
Avelao ny toerana hanirery
Ny iray amin'ireo olana lehibe mitranga amin'ny fialan-tsasatra amin'ny mpivady dia ny fandanianao ny fotoananao miaraka ary tsara hatrany ny fananana fotoana ho anao. Na dia eo am-pialan-tsasatra aza isika dia azo atao ny manana fotoana mitokana. Ohatra, raha misy te-hahita tranombakoka ary ny iray kosa aleony mandeha manodidina ny tanàna, azo atao ny mizara sy izany samy manao izay tiany mandritra ny ora vitsivitsy ny tsirairay. Traikefa nahafinaritra foana ny mankafy ny zavatra mitokana.
Sorohy ny fanalam-baraka
Raha misy zavatra tsy mandeha amin'ny dia, dia sorohy ny fanalam-baraka an'izay nikasa azy. Manao fahadisoana daholo isika ary ara-dalàna izany, satria tsy mitranga foana ny zavatra araka ny kasaintsika. Fa ny zava-dehibe amin'ireto tranga ireto dia ny maha mpivady antsika dia mahay mifanampy isika mba handresy io olana mipoitra io. Amin'izany fomba izany dia tsy vitan'ny hoe manatanjaka ny mpivady fotsiny isika, fa mianatra mianatra miara-miasa koa. Ilaina ny fisorohana ny fifanakalozan-kevitra sy ny fanalam-baraka izay tsy mandeha na aiza na aiza. Na izany na tsy izany dia tsy maintsy fantatrao ny fomba maneho zavatra amin'ny fifanajana, manandrana mahatakatra ny iray hafa ary amin'izany manatratra fifandraisana tsara amin'ny mpivady.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Psychology sy mpivady » Torohevitra hankafizana ny fialantsasatra amin'ny maha mpivady
Pasta gratin miaraka amin'ny romanesco